March 2019 – စာအုပ်မြို့တော်
by MM Book City · Published March 31, 2019
ဟောင်ကောင်သူဋ္ဌေးကြီး လီကာရှင်းက ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ ဒီလိုပြောသွားပါတယ်။ သင်ဘာလို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲ။ သင်ရေစုန်မျောနေတယ်။ အနူတ်လက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းနေပါတယ်။ တိုးတက်မူ အတွက် ဦးနောက်အချောက်မခံဘူး၊ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ မျက်နာကျတော့အသေလုိုချင်တယ်။ မိဘနဲ့ ခွဲရမှာကိုကြောက်တယ်၊ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ စကားကို အမြဲနားယောင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်တော့မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲရဲ မချရဲဘူး၊ ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာကို အကြောင်းပြုပြီး ရှေးရိုးစွဲတယ်။ ဘ၀ကို ကံကြမ္မာပေးတဲ့ အတိုင်းပဲ အသက်ရှင်ချင်တယ်။ ထိုးဖောက်ဖို့...
by MM Book City · Published March 29, 2019
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေဖို့ဆိုရင် ဒီနေ့မှစပြီး အောက်ပါအချက်တွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
1. ရေများများသောက်ပါ 2. မနက်စာကို ဘုရင်လိုစား၊ နေ့လည်စာကိုတော့ မင်းသားလေးလိုစား၊ ညစာကိုတော့သူတောင်းစားလို စားပါတဲ့။ (အားလုံး နားလည်ကြမှာပါနော်)ာ့သူတောင်းစားလို စားပါတဲ့။ (အားလုံး နားလည်ကြမှာပါနော်) 3. သစ်ပင်ပေါ်က ရတဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကို များများစားပေးပါ၊ 4. ဘ၀မှာ3E နဲ့ ရှင်သန် နေထိုင်ပါ — Energy, Enthusiasm နဲ့ Empathy 5....
တစ်ခါက အက်ဒီဆင်ဟာ မီးလုံးကိုတီထွင်ပြီးခါစမှာ သူ့ရဲ့ တီထွင်မှုကို မိတ်ဆက်ဖို့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…။ စာနယ်ဇင်းသမားတွေရောက်လာပြီး အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အက်ဒီဆင်က သူအိမ်ကအလုပ်သမားကောင် လေးတစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့ မီးလုံးကို သွားယူခိုင်းပါတယ်…။ ကောင်လေးဟာ မီးလုံးကိုယူလာပြီး ရောက်ခါနီးမှ ခလုတ်တိုက်လဲပြီး မီးလုံးဟာ ကျကွဲသွားပါတယ်…။ ဒီမီးလုံးဟာ အက်ဒီဆင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တာ အားလုံးသိပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် အင်ဒီဆင်ကတော့ ကောင်လေးကို ဘာမှမပြောဘဲ … စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုသာ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်…။ သူအသစ်ထပ်မံပြုလုပ်ပြီးရင်...
၁။ ရဲရဲ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါ။ ၂။ လူကိုကြည့်ရင် မျက်လုံးကိုကြည့်ပါ။ ၃။ ရေချိုးစဉ် သီချင်းဆိုပါ။ ၄။ စတီရီယိုစက် ကောင်းကောင်းတစ်လုံး ပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပါ။အနောရေးတာမဟူ့တ်ဘူး။ ၅။ ရန်မဖြစ်မနေ ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကဦးအောင် အပြင်းဆုံး ထိုးနှက်ပါ။ ၆။ လှို့ဝှက်ချက်လေးတွေ ထားပါ။ ၇။ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ လက်မလျှော့ပါနဲ့။ ဆန်းကြယ်မှုဆိုတာ နေ့စဉ် ဖြစ်တာမျိုးပါ။ ၈။ ကမ်းလာတဲ့ လက်တိုင်းကို လက်ခံပါ။...
သစ်သားပြားတစ်ခုအပေါ်မှာသံတစ်ချောင်းကို ရိုက်လိုက်တယ်။သံကို ပြန်နှုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။သံက သစ်သားပြားပေါ်မှာမရှိတော့ပေမယ့်သံရဲ့ ဒဏ်ရာကတော့သစ်သားအပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်နော်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတဲ့ စကား..ကျွန်တော်တို့ပြုမူခဲ့တဲ့ အမူအရာတွေဟာ သူတစ်ပါး ရင်ဘတ်ပေါ်ကို စိုက်ဝင်သွားမယ့်အသွားချွန်ထက်တဲ့ သံချောင်းတွေဆိုတာ မမေ့သင့်ပါ။ မပြောခင် သုံးသပ် မလုပ်ခင် စဉ်းစား…သူတစ်ပါးက သူ့ရင်ဘတ်က်ိုပြန်ပြီးပွတ်သပ်စဉ်းစားလိုက်တိုင်း တွေ့နေရမယ့် ဒဏ်ရာဆိုးဆိုးတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့… Credit# < Unicode Version > ဒဏျရာ သဈသားပွားတဈခုအပျေါမှာ သံတဈခြောငျးကို ရိုကျလိုကျတယျ။ သံကို ပွနျနှုတျကွညျ့လိုကျပါ။...
ငှက်ဆိုတာကမွေးကတည်းက ပျံတယ်…ကြီးမှသာ တောင်ပံတွေကသစ္စာမဲ့တာပါ။ ရေစီးက ရိုးဖြောင့်လှပါတယ်…မြစ်ကသာ ကောက်ကွေ့တာပါ။ ဘဝက ဖြူစင်လှပါတယ်…စိတ်အလိုကသာ ညစ်ထေးတာပါ။ အကောင်းဆုံး ပျံ…အမှန်ဆုံး စီး…ပြီးတော့… ကိုယ့်အပေါ် ပြုမူဆက်ဆံစေချင်သလိုသူတစ်ပါးအပေါ် ပြုမူဆက်ဆံပေါ့။ Eagle Breeze Credit# < Unicode Version > ငှကျဆိုတာက မှေးကတညျးက ပြံတယျ… ကွီးမှသာ တောငျပံတှကေ သစ်စာမဲ့တာပါ။ ရစေီးက ရိုးဖွောငျ့လှပါတယျ… မွဈကသာ ကောကျကှတေ့ာပါ။ ဘဝက ဖွူစငျလှပါတယျ…...
by MM Book City · Published March 26, 2019
ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းပြောတဲ့ ” သတ္တိ “ လောကကြီးကို သတ္တိရှိတဲ့လူတွေဦးဆောင်နေတာသတ္တိမရှိတဲ့ကောင်တွေအတွက်နေရာမရှိဘူး။ ဟောဒီသစ်သားပြားပေါ်ကိုသံချောင်းနဲ့ ဒိုင်းခနဲရိုက်လိုက်သံချောင်းစိုက်ဝင်သွားမယ်သစ်သားပြားသူထက်မာတဲ့ကောင်နဲ့တွေ့တော့နေရာ ဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီသံချောင်းကို ကျောက်တုံးပေါ်ရိုက်သံချောင်းပဲကွေးသွားမယ်ကျောက်တုံးက နေရာဖယ်မပေးဘူးI’m sorry ပဲ။ သွေးကြောင်ရင် ဘေးရှောင်သွေးကျဲရင် သစ်သားပြားလို ဘေးပြဲသွားမှာပဲအဲ့ဒီတော့ မင်းတို့မာမလား ပျော့မလား ငါ မာသလားပျော့သလား ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်တွေးတဲ့အခါ ရဲရဲကြီးတွေးမညှာတမ်းတွေး အားမနာတမ်းတွေးကိုယ့်ကိုကိုယ်ညှာတွေးနေသရွေ့ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုယ်သိမှာ မဟုတ်ဘူး အားနည်းချက် မတွေ့သရွေ့ ပြင်ဖို့မရှိဘူးပြင်ဖို့မရှိသရွေ့ အဲ့ဒီလူ တစ်သက်လုံးမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒါ မင်းတို့ ပုံသေယုံ။ ပြီးတော့...
၁။တောင်းပန်ရန်ဝန်မလေးပါနဲ့ ၊မသိပါက မသိကြောင်းဝန်ခံပါ။ ၂။ထမင်းလုံးတိုင်း၊ရေစက်တိုင်း စားစရာရှိသမျှ ရင်ထဲကကျေးဇူးတင်ပါ။ ၃။ငွေကိုမချစ်တဲ့သူက ဘဝကိုမချစ်တဲ့သူ၊ကြီးဖွားဖို့မမျှော်လင့်တဲ့သူ။ ၄။မွေးကတည်းကမည်သူမျှမပြေးတတ်ပါ၊ဒါကြောင့်ဖြေးဖြေးစလုပ်ပါ။ ၅။ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရှိသလို၊ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၆။ရန်ဖြစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာအရင်းဆုံးရပ်သွားသူက ပညာရှိပါပဲ။ ၇။ငွေအကြွေးစေ့တစ်ခုမှာတောင်မျက်နှာနှစ်ခုရှိတယ်။ဘဝတိုင်းမှာလည်းအနိုင်၊အရှုံး ၊အောင်မြင်မှု၊ကျရှုံးမှုတွေရှိတယ်။ ၈။နားမလည်သောသူအားနားလည်အောင်ရှင်း ပြတတ်ပါစေ။ ၉။ဘုရားရှိခိုးတိုင်းမည်သည့်ဓနဥစ္စာကိုမျှမေ တာင်းပဲပညာနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုသာတောင်းယူပါ။ ၁၀။အပင်ငယ်တတ်ခါစကိုမြန်မြန်ကြီးပါစေဆိုပြီး ဆွဲဆန့်လိုက်တာတွေမလုပ်မိပါစေနဲ့၊အမြစ်ပါကြွေသွားမယ်။ ၁၁။သွားတွေကဘာဖြစ်လို့ကြိုးသလဲ(မာ)လို့ ကြိုးကုန်တာပေါ့၊လျှာတွေကရောဘာလိုမကျိုးတာလဲ။ ၁၂။အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရက်ချိန်းတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ၁၃။ကြယ်သီးတွေဟာပထမတစ်လုံးမှားတပ်လိုက်သည်နှင့်အားလုံးမှားတော့တာပါပဲ။ ၁၄။မိမိကိုယ်ကိုတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သေရမည်ကိုစဉ်းစားပါ၊အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသာဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။ ၁၅။လူ့တစ်သက်တာမှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရလိမ့်မယ်၊အရေးကြီးတာကိုသာရွေးလုပ်ပါ။ ၁၆။ကြယ်နှင့်လဟာအရမ်းကိုမြင့်လွန်းပါတယ်။မှီနိုင်သလောက်ကိုသာလှမ်းယူပါ။ ၁၇။အရာရာကိုသတ်မှတ်ချက်ရှိပါစေ၊ပစ္စည်းတစ်ခုအားထိုနေရာမှယူလျှင်ထိုနေရာသို့ပြန်ထားပါ။စည်းကမ်းသည်လူ၏တန်ဖိုး။ ၁၈။စာအုပ်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင်ဗဟုသုတအရဆုံးပညာရှိတစ်ဆူဖြစ်တယ်။ တစ်လလျှင်တစ်အုပ်ဖတ်နိုင်အောင်လုပ်ပါ။ ၁၉။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုသောစကားကိုအမြဲများများပြောပေးပါ။ ၂၀။မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစေချင်လျှင်သူတစ်ပါးကိုကောင်းအောင်အရင်ကူညီပါ။...
အတန်းထဲတွင် လူဆိုးလေးတွေရှိပါသည်။ ပေတေတေ ကပ်တတ်တတ်၊ ပြန်မပြော နားမထောင်၊ ဆင်ခြေများ၊ စည်းကမ်းမဲ့ စသည်ဖြင့် များစွာရှိသည့်အနက် အောင်မြိုင်သည် ထိုအရည်အချင်းများ အားလုံးနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က လူဆိုးလေးတွေကို အများကြီးကြုံတွေ့ဖူးသည်။ မြင်းကောင်းတွေက လက်သားမကျ မီ ရိုင်းတတ် သည်။ သူတို့ အရိုင်း၊ အဆိုးတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်လျှင် မြင်းကောင်းတစ်စီးအဖြစ် ခိုင်းကောင်းပေလိမ့်မည်။ တပည့်တွေကြားထဲတွင် လူဆိုးလေးတွေသည် လူတော်လေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ သူတို့၏...